Wasiirka amniga Kenya Joseph Nkaissery oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka amniga Kenya Joseph Nkaissery oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi
Wasiirkii amniga gudaha dalka Kenya Joseph Nkaissery ayaa la shaaciyay inuu habeenkii xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Warbaahinta Kenya ayaa goor sii horeeysay shaacisay geeridda wasiirka, waxayna sheegeen in wasiirka uu xalay aaday Isbitaalka Karen ee ku yaalla magaalada Nairobi, si uu baaritaan guud halkaasi isugu soo sameeyo.
Wasiirka geeriyooday ayaa la sheegay in maalintii shalay uu ka qeyb galay banaanbax doorasho oo ka dhacay fagaaraha Uhuro Park ee magaalada Nairobi, isagoo isbitaalka Karen u aaday si uu baaritaan guud isugu soo sameeyo, balse markii dambe la shaaciyay inuu geeriyooday.
Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameeynayso sababta keentay geerida wasiirka, oo si weyn looga hadal haayo Kenya.
Wasiirka ayaa ka mid ahaa madaxda ugu dhow madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana wasiirka xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2014-ka, kadib markii lagu badalay Joseph Olelenku oo hore xilkaasi u haayay.
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqay tacsi dhowr maalmood loo murugoonayo geerida wasiirka, waxaana la filayaa in wasiirka loo sameeyo aas qaran.